श्रीमानले छोडेपछी सन्तानको पालनपोषणको निमित्त सडकमा झाडु लगाउने माहिलाले सरकारी अधिकृतमा नाम निकालिन् !!:: Mero Desh
श्रीमानले छोडेपछी सन्तानको पालनपोषणको निमित्त सडकमा झाडु लगाउने माहिलाले सरकारी अधिकृतमा नाम निकालिन् !!
Published on: २६ आश्विन २०७८, मंगलवार ०६:००
कडा मेहनत , समर्पण र आत्मविश्वास । यी केही शब्द मात्र होइनन् । त्यहाँ व्यवहार र जीवन बिताउने तरिकाहरु छन् । यो सकारात्मक दृष्टिकोणसँग भारत राजस्थानको एक नगरपालि काकी कुचिकारको गहिरो नाता छ । जसलाई अहिले भारतभर का युवाहरुको उदाहरण बनाएको छ ।
वास्तवमा, हरेक वर्ष हामी सुन्ने गछौं कि एक रिक्शा चालक, जुत्ता बनाउने वा एक ढाबावाला व्यक्तिको छोरा वा छोरी एक प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा को परीक्षा पास भएको छ ।हामी सबै यस्तो समाचार पढेर छक्क छौं । यो हुन्छ किनकि एक समाज को रूप मा , हामी रिक्शा, जुत्ता बिक्रेता, ढाबा चालक आदि लाई सम्मान संग हेर्दैनौं ।
हामी सोच्छौं कि मजदुर वर्ग र उनीहरुका बच्चाहरु के जीवन मा ठूलो पद हासिल गर्न सक्षम हुनेछन्? तर आशा कंडाराले भने जस्तै जो कडा मेहनत गर्दछ, सफलता उसको खु ट्टा चु म्ब न गर्दछ । आशा भन्छिन् कडा परिश्रम गरे जस्तो चुनौति पनि पार लगाउन सकिन्छ ।जोधपुरकी निवासी आशा कंडाराले २०१८ मा राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस परिक्षामा उपस्थित हुने मौका पाइन,
जसको नतिजा अहिले आइसकेको छ। र यो परीक्षा पास गरे पछि, उनी अब एक सरकारी अधिकारी बनेकी छिन् । प्रशिक्षण पछि, उहाँ सरकारी अधिकृत पदमा पोस्ट गरिनेछ।तर यो बाटो आशा को लागी त्यति सजिलो थिएन। आठ बर्ष पहिले आशा को पति संग झ ग डा भएको थियो । पतिले उनलाई छोडेर गए,
अब दुई सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी पनि उनीमाथि आयो उनले जीविकोपार्जनको लागी केहि गर्नुपर्यो । तसर्थ आशा एक पछि अर्को गरी सरकारी जागिर को फर्म भर्दै रहिन्। उनले भनिन्, मैले वर्ष २०१७ मा तयारी सुरु गरें । सर्वप्रथम परिक्षा को तयारी सुरु भयो। तब सो चे कि यदि म केहि गर्न चाहन्छु, तब मैले यो ठूलो गर्नु पर्छ।
यस पछि आरएएस को लागी तयारी शुरू भयो । तब सबै सर कारी जागिरहरु आए, सबै फाराम भरे । किनकि तपाइँलाई जीवन बिताउन आर्थिक सहयोग चाहिन्छ ।तर यो बाटो आशा को लागी त्यति सजिलो थिएन। आठ बर्ष पहिले आशा को पति संग झ ग डा भएको थियो । पतिले उनलाई छोडेर गए,
अब दुई सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी पनि उनीमाथि आयो । उनले जीविकोपार्जनको लागी केहि गर्नुपर्यो । तसर्थ आशा एक पछि अर्को गरी सरकारी जागिर को फर्म भर्दै रहिन्। उनले भनिन्, मैले वर्ष २०१७ मा तयारी सुरु गरें । सर्वप्रथम परिक्षा को तयारी सुरु भयो। तब सोचे कि यदि म केहि गर्न चाहन्छु,तब मैले यो ठूलो गर्नु पर्छ। यस पछि आरएएस को लागी तयारी शुरू भयो ।
तब सबै सरकारी जागिरहरु आए, सबै फाराम भरे । किनकि तपाइँलाई जीवन बिताउन आर्थिक सहयोग चाहिन्छ ।तर यो बाटो आशा को लागी त्य ति सजिलो थिएन। आठ बर्ष पहिले आशा को पति संग झ ,ग ,डा भएको थियो । पतिले उनलाई छोडेर गए, अब दुई सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी पनि उनीमाथि आयो । उनले जीविकोपार्जनको लागी केहि गर्नुपर्यो ।
तसर्थ आशा एक पछि अर्को गरी सरकारी जागिर को फर्म भर्दै रहिन्। उनले भनिन्, मैले वर्ष २०१७ मा तयारी सुरु गरें । सर्वप्र थम परिक्षाको तयारी सुरु भयो। तब सोचे कि यदि म केहि गर्न चाहन्छु, तब मैले यो ठूलो गर्नु पर्छ। यस पछि आरएएस को लागी तयारी शुरू भयो । तब सबै सरकारी जागिरहरु आए, सबै फाराम भरे ।
किनकि तपाइँलाई जीवन बिताउन आर्थिक सहयोग चाहिन्छ ।२०१८ को जून मा, उनले मुख्य परीक्षा दिइन् । जुलाई मा, उनले जोधपुर नगर निगम मा एक सफाई कर्मचारी को रूप मा एक नौकरी पाइन् । तर, यहाँ पनि उनी स्थायी थिइनन् । यस्तो अवस्थामा, उनी स्थायी नियुक्ति को लागी लागेकी थिइन जुलाइ १, २०२१ मा आशा जोधपुर नगरपालिकामा स्थायी बनाइयो ।
जे होस्, १२ दिन पछि अर्थात् जुलाई १३ मा, राजस्थान प्रशास निक सेवा २०१८को नतीजा आयो। जसमा आशा एक राम्रो श्रेणी संग सफलता हासिल गरिन् ।राजस्थान प्रशासनिक सेवा मा केटीहरु सफलता को अर्को खबर बाहिर आएको छ । हनुमानगढ राजस्थानको एउटा जिल्ला हो। यहाँ एउटा सानो गाउँ छ । नाम भैरसारी हो ।
भैरौसारीका तीन जना केटीहरु राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास गरेका छन् । यी तीन केटीहरु साख्खै दिदी बहिनी हुन् ।भारत टुडे संग सम्बन्धित कपिल शर्मा को रिपोर्ट के अनुसार, यी तीन केटीहरुको नाम रितु, अंशु र सुमन हो । तीनै जना एक किसान परिवारका हुन् र तीनै जना पाँचौ कक्षा पछि कहिल्यै स्कूल गएनन् ।
न त उसको गाउँमा पढाईको लागी स्कुल थियो, न त उसको बुबा सहदेवसँग पैसा थियो । यी तीन दिदीबहिनी एक अर्कालाई सहयोग गरेर पढे। स्कूल पछि कलेज पास गरे र सरकारी नोकरीको तयारी गरे । श्रोत : Taja khabara